Semalt: Zava-dehibe ny fanesorana ny fitantanana Admin amin'ny Google Analytics
Efa nandinika ny Google Analytics ve ianao ary nahamarika fa mitranga ny zavatra tsy fantatra? Eny, mitranga amintsika rehetra izany, noho izany dia tsy vaovao amin'ny zava-misy isika. Indraindray isika dia manangana zavatra sasany ao amin'ny tranokalantsika ary manova ny endriny na ny drafitra, fa ny vokatra dia tsy toy ny efa nandrasana. Izany rehetra izany dia mety hisy fiantraikany amin'ny fitsidihanao sy ny kalitaon'ny fifamoivoizan'ny tranokala - computer for rent. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia tokony hosoloina ny fitohanan'ny fampitaovana amin'ny Google Analytics ianao, ary azo atao izany rehefa mampiasa karazana WordPress plugins ianao. Ary raha tsy mampiasa plugin ianao, dia tokony hanao izany zavatra izany amin'ny tanana ianao. Google Analytics mamela anao hanivana ny fifamoivoizana rehefa manafoana ny adiresy IP ianao na manaisotra ny fifamoivoizana amin'ny votoaty cookie.
Ny ankamaroany dia heverina fa ny fomba voalohany dia tsara lavitra sy feno kokoa noho ny fomba faharoa. Nilaza i Lisa Mitchell, mpitantana ny Success Success of Semalt , fa raha manana adiresy IP izay mamorona ianao na mampiasa laptop na fitaovana amin'ny fivarotana kafe, dia tokony hajanonao ny fitsidihanao manokana voaisa amin'ny Google Analytics. Samy manana ny tombony sy ny tsy fahampian-tsainy ireo fomba roa ireo ary azo fidina araka ny fepetra takinao.
Fongana ny adiresy IP
Ity fomba ity dia mametraka ny Google Analytics amin'ny fomba tsara kokoa. Izany dia hanampy anao hanatsara ny kalitao amin'ny fifamoivoizanao, ary azonao atao ny mijanona amin'ny fijerena avy amin'ny adiresy manokana IP na karazana IP. Na izany aza, tsy azo atao izany raha tsy mampiasa solosaina ianao ary vonona hanitsy ny fanovana avy amin'ny fitaovana iray. Ary raha miala amin'ny birao ianao na any ivelan'ny tranonao dia tsy afaka manome tombontsoa izany fomba izany. Amin'io tranga io, tokony hanandrana hampiasa ny fomba faharoa ianao. Ho an'ny fampisehoana fifamoivoizan'ny IPs manokana, tokony hanamboatra filaharam-batana ianao izay afaka mandinika ny kalitaon'ny fifamoivoizana amin'ny fomba tsara kokoa. Midira ao amin'ny kaonty Google Analytics ary tsindrio ny safidin'ny safidy eo amin'ny faran'ny havanana. Avy eo dia tokony hiantefa ny safidy sivana vaovao ianao ary ampio fanazavana toy ny anaran'ny sivana, ny karazana sivana, ny adiresy IP ary ny hafa.
Esory ny fifamoivoizana amin'ny Cookie Content